Iwo maODHODI maviri emakodhi eiyo iPhone 7 anoratidzwa | IPhone nhau
Mifananidzo miviri yeIPhone 7 yakaratidzwa
Nhau dzakanaka: maererano naEvan Blass, aka evleaks, akarega basa (wepakati) muhombe muhombe, pane chete maviri macodenames eiyo iPhone 7: «Sonora» uye «Dos Palos», kubva kumaguta maviri muCalifornia. Kunyangwe izvi zvisingazove zviri pamutemo kusvika munaGunyana, angave ari mashoko akanaka nekuti paisazove neyePro modhi ine epamberi maficha (uye mutengo) uye maviri mamodheru, iyo 4.7-inch uye iyo Plus, zvakanyanya "kungwara", kwete kushandisa rimwe shoko zvishoma zvakaoma.
Ini pachangu, macodenames maviri anondibata nekuti nekuti, maererano nerunyerekupe, iyo inotevera iPhone ichave yekutanga kune (zvinoita) ichave nevatauri vaviri, izvo zvingaite zvine musoro zita rekuti "Sonora." Kune rimwe divi, ndichiverenga izwi rekuti "maviri" mu "Zvimiti zviviri" uye ndichirangarira runyerekupe rwese, hazviite kuti ndirege kufunga nezve lens mbiri (pamwe 12 + 12Mpx) iyo iyo iPhone 7 Plus kamera ichave nayo.
Zvinoenderana nekubuda pachena, hakuzove neiyo iPhone 7 Pro
Iwo ma2 (maviri!) 2016 iPhone mhando dzakadomwa zita Sonora naDos Palos.
- Evan Blass (@evleaks) July 19, 2016
Iwo maviri (maviri!) IPhone mamodheru a2 ane mazita kodhi Sonora naDos Palos.
Maererano nerunyerekupe, Apple ehe akakoshesa mukana wekutanga iyo iPhone 7 Pro, asi gore rega rega ivo vanokoshesa mazano mazhinji anozoraswa pakupedzisira. Semuenzaniso, chimwe chinhu chavakakoshesa mumakore apfuura ndiko kubvisa 16GB uye izvo zvisati zvaitika kusvikira zvino. Isu tichazozviona pakupedzisira kutanga gore rino.
Kana iri mifananidzo yakasiyana yatakaona, zvingangoita kuti mazhinji acho ari rakagadziriswa ne Photoshop. Chero ziso risina kudzidziswa (senge rangu) rinogona kutadza kuona izvi, asi pane zvirongwa zvinozviona uye zvinoshora chero mufananidzo. Mimwe mifananidzo yatakaona haina kurongwa asi, tichiziva kumhanya uko vamwe vanoshanda (vanogara vachibva kuChina), zvinowanzoitika kuti izvo zvatiri kuona michina inogadzirwa neruzivo rwakaburitswa pamambure.
Kuti kune maviri chete mamodheru anofanirwawo kuve akanaka kumutengo weese mairi iPhone 7. Kana pasina zvekushamisika, mune yakaipisisa mamiriro acho mitengo acharamba aripo, ayo anogara ari mashoko akanaka, kunyanya kana tichifunga nezve iyo mitengo iyo iPhone yakakwira zvakanyanya mumakore achangopfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mifananidzo miviri yeIPhone 7 yakaratidzwa
Ufff seruvara rutema ndizvo zvandinozviwana asi kuna Ya!
Pixelmator inovandudzwa yeIOS nemasimba ekushandisa ekushandisa
Apple Bhadhara ikozvino yawanikwa muFrance